Dare reMakurukota Rosvetuka Nyaya yeKuendesa Hupfumi kuVatema
Chikunguru 10, 2012
Dare remakurukota neChpiri harina kuzeya nyaya yekunetsana panyaya yekuendesa hupfumi kuvatema mumabhanga sezvange zvakatarisirwa.
Asi gurukota rezvekuendasa hupfumi kuvatema, VaSaviour Kasukuwere, avo vainge vachidya marasha svondo rapera vachiti havasi kuzodzoka shure, vanoti vachaita hurukuro nagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe negurukota rezvemari, VaTendai Biti.
Vane ruzivo nezvange zviri mugango redare remakurukota vaudza Studio7 kuti nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira nyaya dzemagwaro ange achitarisa zvemitengo yedonje, kuwanisa vanhu magetsi, mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemigodhi, kuwanisa vanhu zvekurima nenyaya yebumbiro remitemo.
Vataura neStudio7 vanoti nemamiriro akaita zvinhu, hazvisi nyore kuda kuunza nyaya yaVaKasukuwere mudare remakurukota nekuti munopedzisira momuka hondo inotyisa uye zvinotopa kuti vanhu vatotadze kuwirirana zvachose.
VaKasukuwere vakatanga hondo iyi svondo rapera nekupa mabhanga nguva inosvika gore rimwe chete yekuti ape vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana.
Asi nyaya iyi yakarambwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vachitsigirwa naVaGono naVaBiti.
VaKasukuwere vanoti iko zvino vachaisa musoro pamwee chete nevamwe vavo kuitira kuti vaone gwara rekutora kwete kuita rwendo rwembwa sezvavainge vamboti vachaita.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaProsper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti zvange zvoitwa naVaKasukuwere kupinda nemwenje mudziva.
Hurukuro naVa Prosper Chitambara